प्रदेश ५ को उपसभामुखका लागी २ जनाको उम्मेदवारी
२०७४ फाल्गुण ५ शनिबार, बुटवल । प्रदेश नम्बर ५ को भोलि हुने उपसभामुख निर्वाचनका लागि २ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता को समय तोकिएको मा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले आ–आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गरेका हुन् । ... बाँकी अंश»
प्रदेश ६ का उपसभामुखमा घर्ती निर्विरोध
२०७४ फाल्गुण ४ शुक्रबार, सुर्खेत । प्रदेश नं ६ का उपसभामुखमा पुष्पा घर्ती (सुर्खेत) को एकल उम्मेदवारी परेको छ । सांसद घर्तीको एकल उम्मेदवारी परेपछि उनि निर्विरोध निर्वाचित भएकी हुन् । ... बाँकी अंश»
काँग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा समानुपातिबाट सांसद बन्नेहरु, अन्तिम नामावली
२०७४ फाल्गुण ३ बिहिबार, काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको सिटअनुसार उम्मेदवारको नामावली निर्वाचन आयोगमा पुनः बुधबार दुई जनाको नाम सच्याएर पठाएपछि अन्तिम टुंगो लागेको छ । ... बाँकी अंश»
समानुपातिक र राष्ट्रिय सभा गरि पाँचौ पटक सांसद बन्ने काँग्रेसका यि भाग्यमानी
२०७४ फाल्गुण २ बुधबार, काठमाडौं। नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिले समानुपातिकमा पटकपटक एउटै व्यक्तिलाई नल्याउने निर्णय गर्‍यो र सोहि अनुसारको निर्णय गर्न संसदीय वोर्डलाई पनि भन्यो तर व्यवहारमा त्यस्तो भएन। ... बाँकी अंश»
२०७४ माघ २५ बिहिबार, काठमाडौं । नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधान बनिसकेपछि संघीयता सहितको माथिल्लो संसद्को निर्वाचन पनि सम्पन्न भईसकेको छ । ... बाँकी अंश»
राष्ट्रियसभा चुनाव –कुन दललाई कति सिट, को को विजयी, पूरा नतिजा
२०७४ माघ २५ बिहिबार, काठमाडौं । बुधबार सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । दू्रत गतिमा भएको मतगणनाको परिणाम अनुसार बाम गठबन्धनले बहुमत पाएको छ । ... बाँकी अंश»
प्रदेश ३ को राष्ट्रिय सभा : गठबन्धनलार्इ ७५ प्रतिशत, काँग्रेसलार्इ २५ प्रतिशत
२०७४ माघ २४ बुधबार, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि बुधबार भएको प्रदेश नं ३ को निर्वाचनमा बाम गठबन्धनले सम्मानजनक दुई तिहाई मत ल्याएको छ । बुधबार ललितपुरको ... बाँकी अंश»
प्रदेश १ को पहिलो वैठक, ४ मिनेटमै सके सांसदले मन्तव्य
२०७४ माघ २२ सोमबार, विराटनगर । प्रदेश १ को पहिलो प्रदेशसभाको बैठक विराटनगरस्थित मोरङ जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा सम्पन्न भएको छ । दिउँसो १ बजे बोलाईएको बैठकको जेष्ठ सदस्य ओम सराबगीले सञ्चालन गरेका थिए। ... बाँकी अंश»
प्रदेश ४को पहिलो सभा १ घन्टा ५० मिनेटको, सभामुख फागुन ३ मा छानिने
२०७४ माघ २२ सोमबार, पोखरा। प्रदेश ४ को पहिलो सभाको बैठक सोमबार सौहार्दपूर्ण माहोलमा भएको छ। तोकिएकै समयमा सुरु भएको बैठक १ घन्टा ५० मिनेटमा सकिएको थियो । बैठक बिहान ११ बजे सुरु भएर १२ः ५० मा सकिएको थियो । ... बाँकी अंश»
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सफल पार्न कांग्रेसले खटायो प्रतिनिधि र प्रशिक्षक, को कहाँ ?
२०७४ माघ २२ सोमबार, काठमाडौँ । बुधबार हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि नेपाली काँग्रेसले केन्द्रीय प्रतिनिधि र प्रशिक्षक खटाएको छ । ... बाँकी अंश»
मौन अवधि जारी, कुन प्रदेशमा के अवस्था ?
२०७४ माघ २२ सोमबार, काठमाडौँ । बुधबार हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आइतबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि जारी रहेको छ । ... बाँकी अंश»
राष्ट्रिय सभाका मतदातालार्इ कांग्रेसको निर्देशन : २२ गतेसम्म मतदान केन्द्रमा पुग्नु
२०७४ माघ २० शनिबार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा अनिवार्य सहभागिताको लागि मतदातानामावलीमा नाम भएका नेताहरुलाई निर्देशन दिएको छ । कांग्ररेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपाले शनिबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । ... बाँकी अंश»
राष्ट्रियसभाका लागि प्रदेश १ बाट को-को भए निर्विरोध
२०७४ माघ १५ सोमबार, विराटनगर । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश नं १ मा ६ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् भने दुई पदका लागि निर्वाचन हुने भएको छ । ... बाँकी अंश»
एमालेका उम्मेदवार ठहरिए झुठा, उनको मात्र उम्मेदवारी खारेज, अब फिर्ताको समय
२०७४ माघ १४ आइतबार, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवारको अन्तिम नामावली आइतबार प्रकाशन हुँदैछ । ... बाँकी अंश»
राष्ट्रिय सभा : चुनाव चिन्ह दिने आयोगको तयारी
२०७४ माघ १३ शनिबार, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले माघ २४ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारलाई आगामी सोमबार चुनाव चिन्ह प्रदान गर्दैछ । ... बाँकी अंश»
२०७४ माघ १० बुधबार, काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्यको यही माघ २४ गते हुने निर्वाचनका लागि ८३ जना उम्मेदवारबाट बुधवार मनोनयनपत्र दर्ता भएको छ । ... बाँकी अंश»
राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि राप्रपाले बनायो तीन मन्त्रीको समिति, रणनीति के होला ?
२०७४ माघ ९ मंगलबार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको प्राविधिक लगायतका विषय टुंगो लगाउन ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । ... बाँकी अंश»
२०७४ माघ ९ मंगलबार, काठमाडौँ । संघीय संसद् सचिवालयले प्रदेशसभा सञ्चालनको शुरुवाती दिनमा सहजीकरणका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा कर्मचारी खटाएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७४ पौष २३ आइतबार, काठमाडौँ । नेपाल सरकार र व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय तथा प्रदेशसभा संसद् सचिवालयमा जनशक्ति र सचिवालय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा समयमै आवश्यक समन्वय नहुँदा अहिले अन्योल पैदा भएको छ । ... बाँकी अंश»
मधेशको लागि ओलीभन्दा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा राम्रो : अनिल झा
२०७४ पौष २२ शनिबार, काठमाडौं। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झाले मधेशको लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीभन्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा राम्रो हुने बताएका छन् । ... बाँकी अंश»